घर, भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा गर्नुपर्छ पाइलिङ, अन्य यी कुरामा दिनुस् ध्यान - Engineers Post
इन्जिनियर्स पोस्ट May 5, 2021
घर, भवन तथा कुनै पनि संरचना मानिसको सपना र जीवनसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता संरचनालाई दिगो र बलियो बनाउनु निर्माणकर्ताको कर्तब्य हुन आउँछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि मानिसहरु घर तथा संरचना निर्माणमा बढी समेच हुन थालेका छन् । त्यो, सचेतना भनेको घरको प्राविधिक पक्षमा बढी ध्यान दिनु हो । त्यसका लागि केही इन्जिनियरिङ प्रविधिहरु अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
इन्जिनियर, प्राविधिक, विदेशी कामदार र लामो समय निर्माण क्षेत्रमा अनुभव संगालेका ब्यक्तिहरुको सहकार्यमा ‘नेपाल पाइलिङ एण्ड वाटर प्रुफिङ सोलुसन’ नामक कम्पनीले लामो समयदेखि नेपालमा घर तथा संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कम्पनीले बलियो घर तथा संरचना निर्माणमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवा दिइरहेको छ ।
घर वा संरचना निर्माणमा पाइलिङ एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । माटो कमजोर हुँदा, संरचना निर्माण गर्ने सतहमा पानी हुँदा जग बलियो नहुनाले भौतिक संरचना कमजोर हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पाइलिङमार्फत जगलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । पुल, अपार्टमेन्ट, ठूला भवनहरुमा विशेषगरी पाइलिङद्वारी संरचनाको लोड कम गर्ने प्रयास गरिन्छ । अर्थात, यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा पाइलले संरचनाको लोड जमिन मुनी ट्रान्सफर गर्छ र प्रविधिको प्रयोगले लोड ट्रान्सफर हुने स्थानमा विभिन्न बन्दोबस्त गरिन्छ । यो कंक्रिट र स्टीलको प्रयोगले बनेको पातलो स्तम्भ वा लामो सिलिन्डर हो, जसले संरचनालाई समर्थन गर्छ र त्यसको लोड पाइलिङ गरिएको स्थानमा हस्तान्तरण गर्छ । पछिल्लो समय काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवनजस्ता ठाउँमा पाइलिङबिना घर, भवन र संरचनाहरु बन्न छाडिसकेका छन् भने अन्य स्थानमा पनि सुरुवात भइसकेको छ । यसका पनि विभिन्न प्रकार छन् ।
विशेष गरेर डाँडाहरुमा स्लोपको माटोलाई पहिरो जानबाट रोक्न माइक्रो पाइलिङ गरिन्छ । घुमाउने हाइड्रोलिक ड्रिलको प्रयोग गरेर चट्टानी संरचना फेला परेका स्थानमा पनि माइक्रो पाइलिङ गरिन्छ । अर्थात, विभिन्न तरिकाले माटोको सुदृढिकरण गर्दै भविष्यमा संरचनामा क्षति हुन नदिने काम यसमा गरिन्छ ।
ठूला–ठूला भवन, अपार्टमेन्ट, प्लाजाहरु निर्माण गर्दा एक–दुई तला बेसमेन्ट बनाइन्छ । बेसमेन्ट बनाउन एक्साभेसन गरिन्छ । हाम्रो जति जग्गा हुन्छ, जतिमा घर बन्छ त्यसमा एक्जाभेसन गर्ने हो । त्यसो गर्दा वरिपरीका घर, अरुको जग्गामा असर पर्न सक्छ । अरुको घर वा जग्गा क्षति पुगेमा आफैलाई आर्थिक हानी हुन जान्छ । त्यसैले अरुको घरमा हुने क्षतिलाई रोक्न सिट पाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आफ्नो घरको क्षेत्रमा एउटा सिट गाडेर गरिने पाइलिङ हो ।
ग्राभल र आरसीसी पाइलिङ
कुनै संरचना बनाउँदा जमिनको माटो कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि भवन बनाउँदा माटो कमजोर रहेछ भने संरचना पनि कमजोर हुन्छ । त्यस्तो, ठाउँमा पाइलिङ गरेर मजवुत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा डिजाइनअनुसार आरसीसी र ग्राभल पाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘नेपाल पाइलिङ एण्ड वाटर प्रुफिङ सोलुसन’ का इन्जिनियर रामनन्दन शाह यीबाहेक पाइलिङका अन्य थुप्रै प्रकारहरु हुने र भूगोल र संरचना निर्माणस्थलअनुसार त्यहाँ रहेका कमजोरीलाई बलियो आधार खडा गर्न पाइलिङ गर्नुपर्ने बताउँछन् । इन्जिनियर्स पोस्टलाई भन्छन्, ‘हामीसँग संरचनास्थलको अध्यक्ष र परीक्षण गर्ने प्रविधि र प्राविधिकहरु हुनुहुन्छ । अध्ययन र परीक्षणपछि कस्तो पाइलिङ गर्ने भन्ने विषयमा थाहा हुन्छ ।’
ट्वाइलेट, बाथरुपममा वालहरु लिकेज हुने समस्या हुन्छ । त्यो समस्या आउन नदिनका लागि वाटर प्रुफिङ गर्नु आवश्यक छ । ट्वाइलेट, बाथरुम सँगै कौशीमा पनि वाटर प्रुफिङ गरिन्छ । किन कि कौशीमा ‘लिकेज’ भएर पानी चुहिने समस्या आउँछ । ट्वाइलेट, बाथरुमको र कौशीमा एउटा केमिकलको प्रयोगले कोटिङ गरेर भविष्यमा हुने त्यस्तो लिकेजलाई रोक्न सकिन्छ । घर, भवन निर्माण गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
भवनको भत्किएको भित्तालाई मर्मत गरिने प्रक्रियालाई रेट्रोफिटिङ भनिन्छ । यो भनेको घरमा ढलान गर्दा फलामको रड राखेजस्तै भत्किएको स्थानमा ‘ज्याक इन’ गर्ने, भर्टिकल र होरिजेन्टल प्लेट राखेर बाँध्ने विधि हो । रेट्रोफिटिङ जडित भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुन्छन् । यसले भवनका भित्ताहरु हल्लिन पाउँदैन । भूकम्प या अन्य कुनै प्राकृति विपतमा भित्ताहरु नहल्लीयोस भनेर बाँध्ने गरिन्छ । विश्वमा निकै पहिलेदेखि चलेको यो प्रविधि नेपालमा भने भूकम्पपछि चलेको हो । यसका पनि विशेष गरेर दुई प्रकार छन् ।
पुराना घरहरुमा पिल्लर, वीमहरुमा क्षति पुग्यो भने आरसीसी रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ । पिल्लर वा वीमको वरिपरी दण्डीले कसेर त्यसलाई पुन: ढलान गरेर बलियो बनाउन सकिन्छ ।
कार्बन फाइबर रेट्रोफिटिङ
त्यस्तै, दण्डी नथपी क्षति पुगेको पिल्लर वा वीमको प्लास्टर निकालेर केमिकल लगाएर कार्बन फाइबर टाँस्ने कामलाई कार्बन फाइबर रेट्रोफिटिङ भनिन्छ । दण्डी राख्दा संरचना जति बलियो हुन्छ कार्बन फाइबरमार्फत पनि त्यति नै बलियो हुन्छ । यी दुवै तरिकाले संरचनालाई पहिलाको भन्दा बलियो बनाउन सकिन्छ । हाल भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर तथा संरचनाहरुलाई यसैगरी पुन: प्रयोगमा ल्याइएका छन् ।
भूकम्पपछि घर तथा भवनहरु निर्माणमा फरक रणनीति अपनाउन थालिएको छ । लामा घरहरु बनाउँदा त्यसलाई दुई भागमा विभाजित गरिन्छ । यसरी दुई घरको बीचमा १–२ फिट ग्याप छाडिन्छ । त्यो ग्यापमा प्लेट राखेर सटरको दुईतिर रहेको जस्तो च्यानल राखिन्छ । च्यानलमा क्रश बार हुन्छ, जहाँ बेइरिङ हुन्छ । भूकम्प आउँदा बेइरिङ तलमाथि हुन्छ तर प्लेट यताउता जाँदैन । बाहिरबाट हेर्दा घर एउटै देखिन्छ, चिटिक्क देखिन्छ । यसरी एक्पान्सन ज्वइन्ट गरिएका घरहरु भूकम्प आउँदा हल्लिन्छन् तर ढल्दैनन् ।
‘नेपाल पाइलिङ एण्ड वाटर प्रुफिङ सोलुसन’ सँग पाइलिङका लागि बंगाली कामदार छन् भने अन्य कामका लागि दक्ष नेपाली कामदार छन् । इन्जिनियर र विज्ञको टोलीले प्रत्यक्ष अनुगमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गरेर काम गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरण पनि टोलीसँग उपलब्ध छ ।
टोलीमा इन्जिनियरहरु रामनन्दन शाह, राम उद्गर सिंह, स्वस्ती महर्जन र सब–इन्जिनियर विजय कुमार तिसर छन् । त्यस्तै, विगत १७ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कार्यरत रोबिन योञ्जन पनि टोलीमा छन् । उनीसँग करिब १५ वर्ष यस क्षेत्रमा विदेशमा काम गरेको अनुभव छ । यो टोलीले भवन निर्माण, डिजाइनको कामसमेत गर्दै आएको छ ।
इन्जिनियर रामनन्दन भन्छन्, ‘मानिसहरुलाई घर, भवन तथा संरचनाहरु सुरक्षित, बलियो, भरपर्दो र दिगो चाहिएको हुन्छ । किन कि यी भनेका जीवनमा एक पटक लगानी गरेर बनाउने कुरा हुन् । पटक–पटक क्षति भएर दु:ख पाउनुभन्दा पहिल्यै सुरक्षित घर बनाउन हामी राम्रो सेवा दिँदै आइरहेका छौँ । सेवा तथा थप जानकारीका लागि ९८५१०९९९७५ र ९८४९१२४६६० मा सम्पर्क गर्न सकिनेसमेत रामनन्दनले बताए । उनका अनुसार यो सेवा देशभर उपलब्ध हुनेछ ।
ट्विटरमा इन्जिनियरिङ विषयवस्तुमाथि पातलो बहस किन ?
के स्काफले इन्जिनियरको बढीमा मासिक ५ लाख ५० हजार सेवा शुल्क तोकेको हो ?
प्राचीन समयका यी १० इन्जिनियरहरु, जसले संसार परिवर्तन गरे
हरेक इन्जिनियरले थाहा पाउनै पर्ने संसारका शीर्ष ८ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट